Sorare banyere ndị ọzọ, nnukwu Boca Juniors 🇦🇷 - Cazoo
Sorare banyere otu ọzọ, nnukwu Boca Juniors 🇦🇷
Mbido » Mbido » Sorare banyere otu ọzọ, nnukwu Boca Juniors 🇦🇷
Sorare, ikpo okwu dabere na blockchain anyị kwuru banyere ya ke ibuotikọ emi, nke na-agbanwe egwuregwu nke fantasy football, na-ekwuwapụta ugbu a na ọ na-akwado Boca Juniors.
Vamos Boca! Mmmmmmmmmmmm
Anyị na -asọpụrụ ịnabata akara ngosi a @Igihe na #Nụrụ! Mmmmmmmmmmmm
🔭 Kaadị mbipụta mbụ dị na nrecha ugbu a. Oge maka ịgụ ihe: https://t.co/N8zUYv2I17#VamosBoca #Onwe Gị pic.twitter.com/jM2gLr4htd
- Sorare (@Onyinyechukwu) Nwere ike 20, 2021
Boca Juniors: Nnukwu egwuregwu nke South America
Boca Juniors, ebe akụkọ akụkọ Diego Maradona na-egwuri egwu ma na-azụkwa, sonyere ndepụta nke klọb ndị ọzọ 137 na usoro okike Sorare… usoro okike na-eto n'ike n'ike.
Ndị otu mmeri, ma na mpaghara ma nke mba, bara uru maka ihe karịrị $ 213 nde, na-anya isi na-anụ ọkụ n'obi na ndị egwuregwu. Ndị na-egwu egwu nke Marco Rojos, onye mbụ na-agbachitere Manchester United, na Carlos Tevez, akụkọ akụkọ football n'etiti ndị Manchester United na ndị City.
The NFT dijitalụ kaadị nke kpakpando nke Boca Junior elu maka auction
N'iso nkwekọrịta a, kaadị dijitalụ nke mbipụta mbụ nke ụfọdụ ndị egwuregwu Boca Juniors dị ugbu a maka ọrịre Ahia Sorare. Dị ka kaadị niile dị na Sorare, klọb ndị a nyere ikikere zuru oke site na klọb ma ghara ịda ikike ikike ọ bụla.
Ebumnuche na-eto eto nke Sorare
Nkwuputa nke ụbọchị a na-erughị izu atọ Sorare nabatara ndị otu Serie A ise - Cagliari, Genoa CFC, Hellas Verona FC, UC Sampdoria na Udinese Calcio. Site na nbanye ha, e nwere ndị otu 11 Serie A ugbu a, gụnyere Juventus, na gburugburu ebe obibi Sorare.
Ọ bụ ezie na ndị Fans nwere ike ịzụ ahịa obere kaadị dijitalụ, ha nwekwara ike ịhọrọ isonye na asọmpi ma nyeghachi ha ụgwọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdenye aha, pịa bọtịnụ dị n'okpuru. Ga-enwe uru! Ozugbo ị zụrụ ndị egwuregwu 5 na - adịghị ahụkebe, ị ga - enweta kaadị onyinye!
Denye aha gị, dika onyinye onyinye
Site na ndekọ nke ihe ịga nke ọma nke Boca Juniors, ọ bụ oge kachasị mma iji debanye aha na ịchọpụta ndị egwuregwu nwere ike ịba ụba na ọrụ ọkachamara. Site na ịbanye, ndị egwuregwu nwere ohere iji merie kaadị Boca Juniors NFT na-enweghị atụ.
Isiokwu bu nke aOlee otu Sorare si arụ ọrụ, egwuregwu ụwa na-agba ọsọ na Ethereum
Olee otu Sorare si arụ ọrụ, egwuregwu ụwa na-agba ọsọ na Ethereum